Vahaolana momba ny automatisation 20 ambony | Martech Zone
Zoma, Desambra 9, 2011 Alakamisy, May 25, 2017 Douglas Karr
Marketing automation dia lasa resadresaka ifanaovantsika amin'ireo mpanjifa isan-kerinandro. Androany izahay dia niresaka Hubspot (ampiasain'ny mpanjifa), Act-On (izay nampiharinay ho an'ny roa amin'ny mpanjifanay) ary Optify miaraka amina mpanjifa ary niresaka tamin'ny ekipa tamin'ny herinandro lasa fotsiny aho momba ny fahombiazan'izy ireo.
Zava-dehibe ny manamarika fa tsy misy vahaolana automatique marketing iray izay tsara kokoa noho ilay iray hafa. Ny sasany amin'izy ireo dia manana endri-javatra mahavariana, saingy tokony hifantoka bebe kokoa amin'ny fomba fiasa ao anaty sy ny fampiharana hafa ianao amin'ny sehatry ny automatisation marketing fa tsy manandrana mampihatra iray ary manandrana manova ny orinasanao iray manontolo hifanaraka amin'izany.
Ao amin'ny lisitr'ireo safidy lozisialy afaka manampy ny orinasanao dia eo akaikin'ny tampony ny Marketing Automation. Nanjary iray amin'ireo fitaovana fangatahana fangatahana indrindra ho an'ireo matihanina amin'ny marketing. Ny Marketing Automation dia manampy ny orinasa hivadika ho lasa mpanjifa ary hampitombo ny varotra avy amin'ny mpanjifa efa misy.
Capterra dia loharanom-pahalalana lehibe hikarohana vahaolana momba ny rindrambaiko. Zahao ny azy ireo Directory Directory automation ho an'ny lisitr'ireo mpamatsy Marketing Automation.
Tags: Act-OnActoncapterrahubspotoptifymahitsy amin'ny interactiveROI
Dec 9, 2011 amin'ny 9: 35 AM
Nampiasa an'i Marketo aho ary tena mieritreritra fa manana vokatra matanjaka izy ireo. Heveriko fa ny automatisation marketing dia manery ireo fikambanana hieritreritra lalina momba ny traikefa omen'izy ireo ny vinan'izy ireo sy ny fitarihany, ary ny ankamaroan'ny tombony azo dia ny mahay mandrefy ny zava-drehetra ary mizaha toetra tsy misy ezaka.
Debbie Qaqish miaraka amin'ny Pedowitz Group dia miresaka momba ny “Marketing Revenue” tsy an-kijanona, ary azo antoka fa ireo rafitra ireo no manome feo ny feon'ny mpivarotra ho matanjaka toy ny talen'ny varotra satria mitondra data tanteraka.
Hiresaka tsy ho ela isika. Tiako ho fantatra bebe kokoa ny eritreritrao hamerenana ny Act-On.
Dec 9, 2011 amin'ny 10: 53 AM
Nanana traikefa nahafinaritra izahay niaraka tamin'ny @actonsoftware: twitter sy ny mpiasan'izy ireo… olona tena mahafinaritra any izay tena nanampy tokoa. Heveriko fa ny ampahany matanjaka indrindra amin'ny fangatahan'izy ireo dia ny ahafahanao misoratra anarana fisoratana anarana GotoWebinar ary manosika azy ho any amin'ny CRM anao… tena tsara ho an'ireo orinasan-rindrambaiko manosika ny demo sy webinar isan'andro.
Dec 9, 2011 ao amin'ny 2: PM PM
Mamitaka ity fomba ity. Mampifangaro paoma sy voasary izy ary ny "malaza indrindra" dia tsy misy dikany!
Tsy voatery tsy hitovy hevitra aho ry Scott. Izaho dia nitady lisitra tsara momba ny sehatra Marketing Automation nandritra ny fotoana kelikely, na izany aza, ary nieritreritra fa tsy dia ratsy loatra ity lisitra ity. Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony dia tsy maintsy ampifanarahan'ny olona amin'ny fomba marina ny fizotran'ny orinasany!
Dec 9, 2011 ao amin'ny 5: PM PM
Tsy misy ahiahy, azoko izay ezahinao tanterahina. Raha mbola eo ny fampandrenesana, okay. Mirary faran'ny herinandro mahafinaritra!